Etu aga-esi amata ma ọ bụrụ na mmadụ egbochiri gị na WhatsApp 2021
Ọ bụrụ na ị na-eziga mmadụ ozi WhatsApp, mana ị naghị enweta azịza ọ bụla, ị nwere ike ịnọ na-eche ma ọ bụrụ na egbochila gị. Ọfọn, WhatsApp anaghị apụta ma kwuo ya, mana enwere ụzọ abụọ iji chọpụta ya.
Lee Nkọwa kọntaktị na Nkata
Ihe mbụ ị kwesịrị ime bụ imeghe mkparịta ụka na ngwa WhatsApp maka iPhone ma ọ bụ gam akporo wee lelee nkọwa kọntaktị na elu. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ foto profaịlụ ha na nke ikpeazụ ha hụrụ, ọ ga-ekwe omume na ha gbochiri gị. Enweghi avatar na ozi ikpeazụ a hụrụ abụghị nkwa na ha egbochila gị. Kọntaktị gị nwere ike ime ka ha kwụsị ọrụ ikpeazụ ha.
Gbalịa ide ozi n’ekwe ntị ma ọ bụ n’ Callkpọ oku
Mgbe ị zigara otu onye gbochiri gị ozi, nnata nnata ga-egosi naanị akara ngosi. Ozi gị agaghị erute WhatsApp nke kọntaktị ahụ ma ọ bụrụ na ị zigara ha tupu ha egbochi gị, ị ga-ahụ akara ngosi abụọ kama. I nwekwara ike ịnwa ịkpọ ha. Ọ bụrụ na oku gị anaghị agafe, ọ pụtara na enwere ike igbochi gị. WhatsApp ga-etinye oku n’ezie, ị ga-anụkwa ka ọ na-ada, ma ọ dịghị onye ga-eburu na njedebe nke ọzọ.
Gbalịa dinggbakwunye ha na Otu
Nzọụkwụ a ga-enye gị akara aka kachasị sie ike. Gbalịa ịmepụta otu ọhụụ na WhatsApp ma tinye kọntaktị na otu. Ọ bụrụ na WhatsApp gwara gị na ngwa ahụ enweghị ike itinye onye ahụ na otu, ọ pụtara na ha egbochila gị.